Ngaba iMacBook entsha iyi-rig yemisebenzi enyanzelisayo? | Ndisuka mac
Singatsho ukuba, kwi-Apple Keynote yokugqibela eyayibanjelwe kumsitho wokuvula we-WWDC 2017, ayizange isishiye singakhathali ngenxa yezizathu ezininzi. Enye yazo kukucacisa uhlaziyo lwazo zonke iikhompyuter zeMac, njengophawu lokuzibophelela kwenkampani kwiikhompyuter zeMac kwaye ngakumbi ukubonelela ngemveliso kuhlobo ngalunye lomsebenzisi. Ewe, wonke umsebenzisi we-Mac uneemfuno ezithile kwaye ukuba neMac ekufutshane neminqweno yethu kunokuba kufanelekile (ndiyishiya kuluhlu lweengcebiso luka-Apple).
Kwisininzi, iimfuno zomsebenzi zezi: ukufunda i-imeyile, amaphepha, iwebhu, uthungelwano lwasentlalweni, inguqu kwifayile, ividiyo okanye ifoto, ukuyisebenzisa kuxwebhu. Ngezi mfuno, ukuba kukhululekile ngakumbi ukuba kuyilo oluphathekayo, olunobunzima kunye nomtsalane, izixhobo zethu ziyi- IMacBook. Sisixhobo esifanelekileyo kunye nomona wabasebenzisi abaninzi beelaptop.
Ngoku, ngaba singakucela enye into? Ukuza kuthi ga ngoku iiMacBook mounts zethu I-chip ezimbini ze-Intel ze-m3 chip, nokuba kuyilo lwezixhobo okanye umthamo wehardware. Ngale processor, ukwenza ifoto enzima okanye ukuhlela ividiyo ngumsebenzi onzima.
UApple uyazi ukuba ezi khompyuter ziyimpumelelo kwintengiso, njengoko yayinjalo neMacbook Air. Ke, xa kunokwenzeka, kutheni ungaphuculi iMacBook yakho? Kulungile ukusukela ngoku sinokuba neMacBook ene-i5 kunye ne-i7. Kwimeko yeprosesa ye-i5, I-Apple inokucwangciswa kwangaphambili, ewe kuya kufuneka sihlawule i-euro ezingama-300 ngaphezulu kunohlobo oluqhelekileyo kunye ne-m3 yethu eyaziwayo. Sine-5 GHz ye-Intel Core i1,3 engumbini, kunye neTurbo Boost ukuya kuthi ga kwi-3,2 GHz, Kule meko, i Imemori ye-SSD yi-512GB, Xa kuthelekiswa ne-256 GB yenguqulo yokuqala.
Ukuba sifuna ezinye izinto, iApple ikuvumela, emva kokwenza izixhobo ngokwezifiso, ukuze ubandakanye esi sixhobo kunye ne-7 GHz i1,3.Kodwa ngokwenene, ukuba ufuna amandla amaninzi, kuya kufuneka uqwalasele iMacBook Pro, eyakhelwe ukusebenza okuphezulu, nge ukungena komoya ngakumbi, ibhetri (enxulumene ngokufanelekileyo nokusetyenziswa) kunye neemodyuli ezininzi ze-RAM.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngaba iMacBook entsha iyi-rig yemisebenzi enyanzelisayo?
Umguquleli wale mihla yenye yezona zicelo zibalaseleyo zokuguqulela kwezinye iilwimi